Umshini Wokugcwalisa Amakhemikhali - Micvd.com
Izisetshenziswa Zesistimu Yokugcwalisa Kotshwala
Uma udinga imishini yokufaka ethembekile, ehlala isikhathi eside yomugqa wakho wokugcwalisa uketshezi, NPACK inakho konke okudingayo. Siyaqonda ukuthi inqubo yokugcwalisa iziqukathi ngemikhiqizo yamakhemikhali iza nezidingo ezithile — njengokusebenzisa imishini engamelana nokuhlukumezeka kwamakhemikhali. NPACKimishini yokugcwalisa uketshezi ingenziwa kwizidingo zakho ezithile, uqinisekise ukuthi ngeke ukhathazeke ngokuhluleka kwemishini noma nini maduze.
Thola Umshini Wokugcwalisa Amakhemikhali Wamakhemikhali Wezimboni Nezolimo
Amakhemikhali eza ngezinhlobo ezahlukahlukene zama-acid kanye nama-viscosities, kanti imishini efanelekile yokufaka amabhodlela kwabanye ingahle ingahambisani neminye. NPACK usebenze ngamakhemikhali ahlukahlukene ahlukahlukene, eklama imishini yokugcwalisa esimweni ngasinye ukuze aqinisekise ukuvumelana okuhle kakhulu. Lapho usebenza nathi, sizosebenza kanzima ukuthola imishini engcono kakhulu yohlu lwakho oluthile lokupakisha, ukuqinisekisa ukuthi imishini yakho isebenza ngokubambisana. Noma ngabe udinga ama-filters we-liquid noma ukusetha okuphelele, uzothola okudingayo NPACK. Siyaziqhenya ngokusebenzela izimboni ezahlukahlukene, kubandakanya nezimboni zamakhemikhali ezolimo nezolimo.
Imishini Yokugcwalisa Imishini Yokugcwalisa Ibhodlela
Uma udinga amafilitha e-liquid ezitsheni zakho, ungabheka ekukhetheni kwethu imishini ehlukahlukene ukubona ukuthi iyiphi (s) ezolungela uhlelo lwakho lokusebenza. At NPACK, siyaziqhenya ngokuthengisa izinhlobo ezahlukene zefilitha zokethi ukuze zivumelane nezidingo eziningi, kufaka phakathi ukuhambisana notshwala bamakhemikhali.
Kungani Khetha NPACK Ngezinto zakho Zokupakisha?
Umshini wokugcwalisa amakhemikhali enzelwe amakhemikhali ezolimo noma awezimboni kufanele uhlale waklanywa ngokumelana nokugqwala okudingekayo, kanye nokufaka ukubonakala okuhlukile nezakhiwo ezinwebayo. NPACK ilungiselela izinhlobo ezahlukahlukene zemishini yokufaka amabhodlela amakhemikhali, futhi sinolwazi ngama-compounds wezezimboni nawezolimo. Akunandaba ukuthi ugcwalisa muphi umkhiqizo, sinokuthile okuzohambisana nezidingo zakho.
Xhumana nathi namuhla ukuze ufunde kabanzi mayelana nezimboni esizisebenzisile, kanye nezisombululo ezigcwala kakhulu zokugcwalisa amabhodlela emikhiqizo yakho yamakhemikhali yezolimo neyezolimo. Sikulungele ukukusiza ekutholeni imishini yokugcwalisa uketshezi efanelekile izidingo zakho zokufakwa ngaphakathi kwebhizinisi lakho.
Umshini wokugcwalisa umshini wokugcwalisa we-NP-VF-1
Umshini wokugcwalisa we-pvoon we-NP-VF-1 othomathikhi we-servo motor wenziwe ngokukhethekile futhi wakhiwa isisekelo ku-NP-VF, Kusebenza kakhulu ukugcwalisa i-viscous liquid, njengemikhiqizo yezimonyo, imikhiqizo yamakhemikhali yansuku zonke, kanye nemikhiqizo yokudla, efana umshini wokugcwalisa uju, umshini wokugcwalisa isoso.
Iqhutshwa yi-general servo motor
304 Ukwakhiwa kwensimbi engenacala,
Izingxenye zokuxhumana ngoketshezi ziyinsimbi engagqwali engama-316L
Zonke izingxenye zokuxhumana zingase zibe iTeflon, i-Vinton futhi ihlasele ngezidingo zakho.
Adapt Brand edumile yomhlaba yeZakhi ezifana ne-Nokia, Schneider, nePanasonic
I-Adapt Pan pan servo motor yokushayela unhlangothi wepiston.
Imibhobho esemzimbeni 2 4 6 8 10 12 16
Ivolumu (ml) 10-30ml 30-100ml
I-30bpm I-50bpm I-70bpm I-90bpm I-100bpm I-120bpm I-160bpm
Power I-220V 50 / 60hz
Umshini wokugcwalisa umshini wokugcwalisa okokuzenzakalelayo we-NP-VF-1
Kulula ukulungisa ivolumu yokugcwalisa, ukulungisa okuzenzakalelayo ngesikrini sokuthinta, ukunemba okuphezulu nesivinini esitebekile.
Uhlelo lokugcwalisa uhlobo lwelayini kulula ukuluguqula ngezinhlobo eziningi ezahlukene zamabhodlela
Kulula ukugcina, akukho amathuluzi akhethekile adingekayo.
Akukho ibhodlela, akukho ukugcwalisa, ukulawula okuzenzakalelayo kwe-PLC
Ukugcwaliswa kwama-nozzles avinjelwe ngamaconsi ama-anti, usilika, ne-auto cut viscous liquid
Ivolumu efanelekile yokugcwalisa, ngaphakathi kwe-± 0.5-1% nekhawunta ephelele yebhodlela.
Izigxobo ezikhethekile noma ama-hoses aguqulelwe uma uketshezi luyingozi.
Izibhamu zokudonsa phansi ukuze ugcwalise imikhiqizo ye-foaming uma kunesidingo
Umlomo webhodlela ungatholakala.
Umshini Wokugcwalisa we-NP-GF Bleach
NPACK Umshini wokugcwalisa we-NP-GF Bleach Liquid Filling uklanyelwe ngokukhethekile ukubonwa okungaphansi kepha ukugcwaliswa koketshezi okuwonakalisayo. Umshini wonke ulawulwa yiSchneider PLC, ongabona ukugcwaliswa okuqondile, ukusebenza okuzinzile kanye nokuhlelwa okulula kwepharamitha. Ingxenye ye-Pneumatic yamukela uhlobo lwe-AirTAC ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile kwesikhathi eside. Kuyinto isicelo sokugcwalisa i-Acid, izinto ze-alkali, ukubulala izinambuzane okulimazayo kakhulu, ama-disinfectant angama-84, isicoci sendlu yangasese, iodine, njll.
1. Zonke izinto ezisetshenziselwa umshini zakhiwa yi-PVC ukuze zilwe nokubandakanya ukuhambisa, ibhokisi lokulawula.
2.Ukulawulwa kweSchneider PLC, nokusebenza kweSchneider touch screen, kulula ukushintsha usayizi noma ukuguqula imingcele.
3. Izinto ze-pneumatic konke kungeniswa, ukuqina nokuthembekile.
4. Ukuzwela kwesithombe-kagesi nokulawulwa kokuxhuma kwe-pneumatic, ukuvikelwa okuzenzakalelayo kokushoda kwebhodlela.
5. Isakhiwo esiseduze sokulungiselela, ukubusa okulula, okulungele ukupakishwa kwawo wonke osayizi wamabhodlela.
imodeli Umshini wokugcwalisa we-NP-GF othomathikhi wokugcwalisa amandla adonsela phansi (uketshezi olonakalisayo)
Imibhobho esemzimbeni 6 8 10 12 16 20
Ibanga lokugcwaliswa kwe-Idea 100-1000ml, 500-5000ml
Amabhodlela wohlelo Amabhodlela ayindilinga, amaflethi noma alawula
Nge-1000ml I-24bpm I-32bpm I-40bpm I-48bpm I-64bpm I-80bpm
Amandla kagesi I-220V, 50hz
1. Sebenzisa impilo ye-PVC eqinile futhi ende
2. Ukulawulwa kwe-PLC, bese ulungisa ivolumu yokugcwalisa nge-touch screen
3. Izindleko eziphansi zokutshala imali
4. Diving ikhanda lokugcwalisa ku-foamy anti
Umshini wokugcwalisa ongu-NP-GF Corrosive Liquid Filling Machine
NPACK I-NP-GF Umshini wokugcwalisa owenziwe nge-Corrosive Liquid Filling yakhelwe ngokukhethekile i-viscosity ephansi kepha ukugcwaliswa koketshezi okuwonakalisayo. Umshini wonke ulawulwa yiSchneider PLC, ongabona ukugcwaliswa okuqondile, ukusebenza okuzinzile kanye nokuhlelwa okulula kwepharamitha. Ingxenye ye-Pneumatic yamukela uhlobo lwe-AirTAC ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile kwesikhathi eside. Kuyinto isicelo sokugcwalisa i-Acid, izinto ze-alkali, ukubulala izinambuzane okulimazayo kakhulu, ama-disinfectant angama-84, isicoci sendlu yangasese, iodine, njll.
I-1.Yonke impahla yomshini yakhiwa i-PVC ukuze iguqulwe ngokulwa nokufaka okuhambisa, ibhokisi lokulawula.
Ukulawulwa kwe-2.Schneider PLC, nokusebenza kweSchneider touch screen; kulula ngokushintsha usayizi noma ukuguqulwa kwamapharamitha.